Ny majika Sephirotic dia mifototra amin'ny hoe ny saina ao amin'ny olombelona dia miditra amin'ny fahatsiarovan'ny planeta, izay rafitra ambaratongam-pahefana. Anisan'izany ny boky Ejipsianina fahiny tao Thoth sy ny Kabbala jiosy.
Ny fampiharana ny majika Sephirotic dia maneho ny foto-kevitra momba ny toeram-pitsaboana 10 an'ny Genius (Sephira) an'ny Tany, izay mifandray amin'ny fahitalavitra 22. Ny vokatra dia ny hazon'ny fiainana. Ny olona tsirairay eto an-tany, na ny fahatsiarovany, dia miditra amin'ny vondrona sasany, izay antsoina hoe fandokoana. Izy ireo kosa dia mamolavola fahatsiarovan-tena amin'ny planeta, ary aorian'izay dia miditra ao amin'ny rafitra Solar ny zava-drehetra, ary avy eo ao amin'ny Galaxy. Vokatr'izany, ny magy sefirika dia manondro fa ny fahatsiarovan-tenan'ny olombelona dia afaka mamolavola vaovao, ary izany dia mitondra fiovana eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Miankina amin'ny toerana misy ny olona ao anatin'ny fahatsiarovantena amin'ny planeta, ny olona rehetra dia mizara ho efatra ao anaty baomba:
mpandranto nankany aminao;
sages na mages.
Ny avo indrindra dia ny caste, ny lehibe kokoa ny sehatry ny fahatsiarovan 'ny planeta. Ireo olona izay ampahany amin'ny tora-pasika 4 dia ny "fisaka fisainana" amin'ny planeta. Voamarina fa afaka manova ny zavaboary eto an-tany izy ireo.
Ao amin'ny magic Sephirotic, ny sokajy faha 4 dia nozaraina ho dingana:
Hoavy. Tsy manana fahafahana hanova ny toetry ny rafitra.
Mpanasitrana. Afaka manova ny toetry ny rafitra dynamique dynamique.
Mpahay siansa. Azon'izy ireo atao ny manimba ny fifandraisana amin'ny molekiola tsy misy mpikaroka sy ny fitambaran'ny kristaly.
The Etherlords. Manana ny fahafahana mifehy ny famaranana ny planeta.
Ampiasao ireo torolalana momba ny asan'ny Tree of Life miaraka amin'ny karaoty lehibe 22 Tarot, izay maneho ny lafiny sasany amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny planeta. Ny sarintany tsirairay dia manana lanjany, ary ny sary dia fampianarana izay azonao amin'ny fijerena ny bokin'i Thoth.
Coralstone - toetra mahagaga
Inona ny endriky ny an'ny nify?
Ny boaty Pandora - inona no ao anatin'ny boaty an'i Pandora ary inona moa izany?
Famoahana ny Veles
Ahoana ny fomba fiantsoana ny Mpanjakavavin'ny Spades amin'ny tolakandro?
Rahoviana no ho tonga ny faran'izao tontolo izao?
Ahoana ny endrik'ireo fehezan-tena marina?
Misy lozam-borona Loch ve?
Vavolombelon'i Jehovah - iza izy ireo ary nahoana izy ireo no norarana?
Inona no asehon'ny goblin?
Ny andriamani-pahamarinana, fahamarinana ary famonoana amin'ny angano
Andriamanitry ny fahafatesana
Andriamanitra Vulcan amin'ny anthologies maro
Ahoana no hiantsoana an'i Charlie ho tena izy?
Modely kiraro 2018 - ny fironana farany, ny vaovao, ny loko ary ny fironana amin'ny vanim-potoana vaovao
Ahoana ny fanangonana ny tongolo lay ho an'ny kibab shish?
Cherries - toetra mahasoa
Ny jiroman'ny ririnina ho an'ny vehivavy - 28 sary avy amin'ny modely modely amin'ity vanim-potoana ity
Ahoana no hitenenako ny vadiko momba ny fitondrana vohoka?
Tuberkulose amin'ny taovam-pananahana
Nahoana no nofinofy voaloboka?
Inona no atao hoe fiparitahan'ny tsiranoka?
Fandraharahana madinika - inona no tokony hatao?
Tablets avy amin'ny tsy fahamaotiana amin'ny maha-bevohoka
Ahoana no hamerenana vintana tsara?
Toeram-ponenana Aquarium - votoatiny
Fanomezana ho an'ny lehilahy nandritra ny 70 taona
Atony amin'ny tsinay
Ahoana no atao hoe siropam-panafody?
Ririnina amin'ny kisoa
Amin'ny akanjo hanaovana akanjo tsara tarehy?
Ny tombontsoa azo avy amin'ny menaka solika ho an'ny vatana